Ireo zavatra kely manatsara ny traikefan'ny mpampiasa! | Martech Zone
Ireo zavatra kely manatsara ny traikefan'ny mpampiasa!
Alatsinainy, Aogositra 6, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Androany no andro voalohany niasako tamin'ny naha-Talen'ny Teknolojia ahy ho an'ny orinasan-jotra tanora Marketing sy eCommerce eto Indianapolis, antsoina hoe Patronpath. Rehefa nandinika ny rindrambaiko androany aho ary nanampy tamin'ny fampidirana vaovao dia nampahery ahy ny fahaizan'ny fampiharana. Ny fampiharana dia mampifandray ny filaharambe an-tserasera amin'ny maro pos rafitra.
Manantena ny hiara-hiasa amin'ireo ekipan'ny fampandrosoana izahay hitondra ny mpampiasa Interface hampiasaina azo ampiasaina tanteraka CSS ary, angamba, ny sasany AJAX. Ny vaovao lehibe dia ireo dia fanovana kosmetika amin'ny ankapobeny izay tsy mitaky fanalefahana sy fanarenana ny fampiharana. Amin'ny ankapobeny, mino aho fa azo hatsaraina amin'ny fomba roa ny fampiharana, voalohany ny fahaizana manamboatra ny fifandraisan'ny mpanjifa ary ny faharoa dia ny fampiharana 'zavatra kely' fototra.
Raha niasa tao Paypal omaly alina aho dia nahita 'zavatra kely' fotsiny. Rehefa mampifandray rohy manokana ao amin'ny interface Paypal ianao, dia misy tooltip fade-in mahafinaritra miseho ary manjavona rehefa miala aminy ianao. Ity misy pikantsary:
Ny lantom-peony toa an'io amin'ny lozisialy izay tena mahatonga azy io ho lasa traikefa tsara kokoa ho an'ny mpampiasa. Ny tena manaitra kokoa angamba dia ny hoe tsy nanelingelina ireo mpamorona ao Paypal ny 'famerenana amin'ny laoniny ny kodiarana', dia nahita tranomboky tsara izy ireo ary nampihatra izany.
Hikaroka ireo sy ny teknika hafa aho ato anatin'ny volana ho avy hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa an'ireo rindranay.
Ampio media amin'ny tranokalanao mora foana miaraka amin'ny Wimpy Player
Mamporisika ny fanafanana ny tany ny banky
Aug 7, 2007 amin'ny 4: 09 AM
WOW, tsy fantatro fa loharano misokatra ny tranomboky UI an'ny Yahoo ary ao amin'ny Sourceforge … kilalao vaovao hafa tsy maintsy hilalaovako izany. 🙂
Ny noheveriko fa tena mahafinaritra tokoa ny traikefan'ny mpampiasa vao haingana dia ny nanova ny Yahoo Webmail Beta vaovao ary nokarakaraina tamina torolalana hita maso tena tsara miaraka amin'ny toro-hevitra mifandraika amin'ny singa tsirairay.
Tsy haiko raha anisan'ny Tranomboky YUI ity kaody ity, fa raha izany no izy dia mety ho zavatra tsara ampiana ho an'ny fampiharana ecommerce-nao.
8 Aogositra 2007 à 7:12
Yahoo dia manana fanangonana singa UI marobe, Nick. Aza hadino ny mijery ny fanaraha-maso ny grid. Mahagaga tsotra izao. Ary amin'ny famakiana ny antontan-taratasin'izy ireo sy ny fifanarahana momba ny fanomezan-dàlana – eo daholo izany raha mbola tsy mitady fanohanana ianao.
Tsy mpisolovava aho, na izany aza… mety te-hijery indroa ianao!